ရွှေတွံတေးဆရာတော် ကန်ချနဘူရီ ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းသို့ ကြွရောက် | MoeMaKa Burmese News & Media
ပဲခူးတိုင်းအတွင်း ရေကြီးမှု ပုံရိပ်များ - overflow of Bago River
အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂
ထိုင်းနိုင်ငံ ကန်ချနဘူရီ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကလေးများစာသင်ကျောင်းသို့ရွှေတွံတေးဆရာတော်နှင့် မာကိုပိုလို ကုမ္မဏီဒါရိုတ်တာများအဖွဲ့ ၁၂. ၁၀. ၂၀၁၂ နေ့ကသွားရောက်ခဲ့ကြပြီး အမှတ်တရတီရှပ်များနှင့် ခေါက်ဆွဲ၊ မုန့်မျိုးစုံဝေငှခဲ့ကြသည်။
ရွှေတွံတေးဆရာတော်က “ကလေးတွေ ၁၆၀ လောက်ရှိတယ်။ ၇ တန်းအထိရှိနေကြပြီး ရွာပြန်ရင် ကျောင်းဆက်နေနိုင်အောင် မြန်မာသင်ရိုး အတိုင်းသင်ပေးတယ်။ အကျိုးဆောင်တွေက အမာခံထောက်ပံ့ပေးကြတယ်။ ကလေးတွေကို ပညာရေးအသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ ကျောင်း ဆောက်ပေးဖို့တော့ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေလာလျှောက်ထားတာရှိတယ်။ လက်တွေ့တော့မဖြစ်သေးဘူး” ဟု မိန့်ကြားခဲ့သည်။